Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina fiaramanidina KLM ihany: Vaksiny: Singapore-Singapour
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Sidina fiaramanidina KLM ihany: Vaksiny: Singapore-Singapour.
KLM Royal Dutch Airlines dia hanolotra dia tsy misy kararantina amin'ny sidina Vaccined Travel Lane (VTL) mankany Singapore avy any Amsterdam isaky ny alatsinainy sy asabotsy.
Tamin'ny 21 Oktobra 2021, Air France dia miasa sidina Vaccinated Travel Lane (VTL) roa voatondro isan-kerinandro avy any Paris mankany Singapore.
Hatramin'ny 1 Novambra 2021, KLM dia miasa sidina Vaccinated Travel Lane (VTL) roa voatondro isan-kerinandro avy any Amsterdam mankany Singapore.
Ireo mpandeha dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny Vaccinated Travel Lane (VTL).
Hatramin'ny 1 Novambra 2021, KLM Royal Dutch Airlines dia hanolotra dia tsy misy quarantine miaraka amin'ireo sidina Vaccined Travel Lane (VTL) voatondro ho any Singapore avy any Amsterdam isaky ny alatsinainy sy asabotsy.
Amin'ny alàlan'ny foibeny ao amin'ny seranam-piaramanidina Amsterdam-Schiphol, KLM hiditra amin'ny tambajotr'izy ireo mifameno sy hanolotra sidina VTL efatra voatondro isan-kerinandro ary sidina VTL tsy voatondro enina isan-kerinandro mankany Singapore.
Roland Coppens, tale jeneraly Air France KLM Azia atsimo atsinanana sy ny Oceania dia naneho hevitra hoe: Singapore. Air France sy KLM dia namorona tambajotra mifameno miaraka amin'ny sidina VTL efatra voatondro isan-kerinandro mankany Singapore, ary sidina VTL tsy voatondro enina avy any Paris sy Amsterdam. Amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Air France KLM be dia be izahay, afaka mampifandray ireo firenena VTL maro amin'ny alàlan'ny hubs misy anay roa any Paris sy Amsterdam, miaraka amin'ny fepetra tapakila malefaka. ”
Fandaharam-sidina KLM avy any Amsterdam mankany Singapore
fandaharam-potoana Isan'ny sidina Day Departure Arrival fiaramanidina
hatramin'ny 31 Oktobra 2021 KL835 / KL837 / KL839 Daily 21: 15 15: 45 + 1 B787 / B77W
01 Novambra 2021 hatramin'ny 26 Martsa 2022 KL835 / KL837 / KL839 Talata
Zoma 21: 05 16: 20 + 1
KL833 (VTL) Alatsinainy